Turkiga oo cambaareeyay qarixii ka dhacay Magaalada Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Turkiga oo cambaareeyay qarixii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Turkiga oo cambaareeyay qarixii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareeysay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay wadada 21-ka Octoober ee degmads Waaberi, kaas oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga lana soo marsiiyay Safaaradooda Muqdisho ayaa lagu sheegay in qaraxaasi uu ahaa weerar argagaxiso, aadne uga xumaadeen markii ay maqleen warka sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen dad badana ay ku dhaawacmeen qaraxa ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay degmada Waaberi ee Muqdisho.
” Waxaan si adag u cambaareyneynaa weerarkan argagaxisada ah, waxaana sidoo kale tacsi u direynaa Shacabka walaalaha ah iyo Dowladda Soomaaliya. Waxaan Allah uga rajaynaynaa naxariis kuwa naftooda ku waayey iyo caafimaad degdeg ah oo ay helaan dadkii ku dhaawacmay qaraxa ayaa lagu yiri” Qoraalka dowladda Turkiga.
Ugu dambeyn Turkiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan garab istaagga Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
Dowladda Turkiga ayaa waxaa ay kamid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana ay Muqdisho iyo dalkaasi Turkiga ku tababartaa Ciidamo katirsan kuwa dowladda Soomaaliya, kuwaas oo dagaal kula jira Ururka Al-Shabaab.
Turkiga oo cambaareeyay qarixii ka dhacay Magaalada Muqdisho was last modified: January 13th, 2022 by warsan radio
Maamulka gobolka Gedo oo war kasoo saaray doorashada Degmada Garbahaarey